Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Dominik Szoboszlai Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Dominik Szoboszlai Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ezinụlọ, Ndị nne na nna, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Ndụ Onwe na Net Net.
N'okwu ndị dị mfe, anyị na-ewetara gị njem ndụ nke Midfield, site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, nke a bụ oge ọ bụ nwata rue ụlọ okenye - nchịkọta zuru oke nke Dominik Szoboszlai Bio.
Anyị na-ewetara gị akụkọ ndụ Dominik Szoboszlai. Lee ndụ ya ma bilie foto.
Ee, ọtụtụ ndị nyocha n'afọ 2021 buru amụma na ọ nwere ike ịghọ onye kachasị mma n'etiti ụwa n'ọdịnihu na-abịa. N'ihi ya, ọ ga-abụrịrị na ọ nwụchiri onye nchịkwa nke Arsenal, Emery. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara akụkọ ndụ ya, nke bụ ihe na-atọ ụtọ. N’atughi nnukwu nsogbu, ka anyi bido.
Dominik Szoboszlai Childhood Akụkọ:
N'ihi na ndị na-ebido Biography, ọ na-eburu aha ya "obere". Dominik Szoboszlai a mụrụ na 25th ụbọchị nke Ọktoba 2000 nne ya, Zsanet Nemeth na nna, Zsolt Szoboszlai, na Szekesfehervar, Hungary. Ọ bịara n'ụwa dị ka ọkpara nke ụmụ abụọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti ndị mụrụ ya na-ese n'okpuru.
Lee ndị mụrụ ya, Zsanet Nemeth na Zsolt Szoboszlai. Obi abụọ adịghị ya, o werela ịma mma nne ya.
Dominik Szoboszlai Na-etolite Days:
O doro anya, onye Hungary na-eto eto bụ nwata nwere obi ụtọ nke riri ma drankụọ football n'oge ọ bụ nwata. N'oge ahụ, ọ chọghị igwu egwu na ihe egwuregwu ndị ọhụrụ dịka nna ya nyere ya bọọlụ.
N'ezie, ọ dịghị ihe nwere ike ịgbanwe obi ya karịa nna ya otu egwuregwu bọọlụ. Obi abụọ adịghị ya, Szoboszlai na-arụ ọrụ iji mezuo nrọ nke nwata.
Dominik Szoboszlai Ezinụlọ:
Dịka e kwuru na mbụ, teknụzụ dribbler ahụ si Szekesfehervar, nke bụ obodo itoolu kachasị na Hungary. N'obodo ya bido na narị afọ nke ise BC. N'ihi ya, ọ bụ otu n'ime obodo kacha ochie na Hungary.
A gọziri Hungary n'ezie inwe talent dị ka ya.
Ebe Szoboszlai si malite abụghị obere ebe dịpụrụ adịpụ n'etiti ebe ndị nwere nnukwu ụlọ na ebe ewusiri ike na Hungary. N'ezie, ọ bụ ebe obibi aha ọjọọ Bory Castle. What's Castle Bory bụ ọrụ aka, nke wuru gburugburu ogige mara mma nke Jeno Bory na mmalite afọ ndị 1900.
Dominik Szoboszlai Ezigbo Ezinụlọ:
N'ụzọ na-akpali mmasị, nwatakịrị ahụ tolitere n'ezinụlọ nwere obere nchegbu banyere ego. O doro anya na nna ya bụ ọkachamara n'egwuregwu na-akwado ezinụlọ ya na ego ọ na-enweta site na egwuregwu. Enweghị obi abụọ, Zsolt nwere ezigbo agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ. N'ihi ya, ọ maara nnọọ otu esi elekọta mkpa ezinụlọ ya, ọbụlagodi mgbe ọ lara ezumike nká.
Olee otu Dominik Szoboszlai Football Care Malitere:
Ọ dị obere mgbe ọ dabara n'egwuregwu ahụ.
Njem nke ọkachamara ọkachamara malitere n'oge ọ dị obere. Mgbe ọ na-emechi 6, ndị mụrụ ya maara mkpa bọl debara aha ya na Videoton - ụlọ akwụkwọ mmuta bọọlụ - na 2006. N'ezie, Szoboszlai lebara anya na mmemme nke ụlọ akwụkwọ egwuregwu ya.
Otú ọ dị, nna ya ga-enye ya ihe mmụta ọzọ dị ka onye nchịkwa onwe ya.
Obere otu afọ mgbe ụbọchị ya gachara na ntọala Videoton, ndị nne na nna Szoboszlai hụrụ mkpa ọ dị ilekọta ntorobịa ya. N'ihi ya, Zsolt (nna ya) malitere ụlọ akwụkwọ egwuregwu ọhụrụ, nke ọ kpọrọ Akademie Fonix Gold FC.
“Nna m bụ isi sekpụ ntị na mmepe m. Oge ọ ga-eji na-azụ m ma na-adụ m ọdụ agaghị ekwe omume ichezọ.
Dị ka ọdịbendị, ọ ga-aga n'ihu na-egwu m mgbe ọ bụla ọzụzụ nke otu ahụ gwụchara. N'ikwu eziokwu, emegola m karịa ndị ọzọ na agụmakwụkwọ m. ”
Dominik Szoboszlai Ndụ Ndụ Mmalite:
Site n'ịrụsi ọrụ ike na agụụ, onye dribbler ahụ bịara na-eto nke ọma n'etiti ọtụtụ talent ndị ọzọ na-abịa. Afọ asatọ nke ọzụzụ ya n'okpuru nlekọta nna ya na Fonix Gold nyere ya ihe ùgwù nke ịgagharị klọb ọkachamara ndị ọzọ. N'ime afọ ndị ahụ, onye na-egwu egwuregwu ahụ ji Ujpest gbazinye ego na 2011.
Onye obere na-etinyekarị ihe mmụta nna ya n'obi, ọbụnadị na pitch.
N'ụzọ na-akpali mmasị, Szoboszlai mụtara ọtụtụ ihe banyere bọọlụ tupu ya abanye na MTK Budapest na 2015. Mgbe o tinyechara ọrụ pụrụ iche na MKT, FC Liefering bịara na-achọ ọrụ ya. N'ihi ya, ọ malitere njem 400km gaa Austria ebe o sonyeere ndị ntorobịa Liefering na 2016.
Nke nta nke nta ọ malitere ịmalite na Austria.
Banye na otu nke abụọ nke Salzburg (Liefering) ekweghị onye ọkpụkpọ ọkpụkpọ nkwa ịga nke ọma na akpaghị aka. N'oge ahụ, ọ dị kilomita site na ịnweta oge egwuregwu na-agbanwe agbanwe. Agbanyeghị, ọ jigidere isi ya ogologo oge wee bilie n'etiti ndị Liefering. N’ụzọ dị mwute, akwara adọwara adọwa mere ka ọ ghara ịrụ ọrụ ruo izu ụfọdụ. N'ihi ya, mmerụ ahụ mere ka ọ ghara ịkwaga asọmpi kachasị elu.
Dominik Szoboszlai - Bio Road Iji Mara Mma:
Dị ka akara aka ga-esi nweta ya, onye na-eto eto iri na asaa ahụ sonyeere Salzburg n'okpuru njikwa nke Marco Rose na 17. N'ebe ahụ, o guzobere onye na-eyi egwu egwu Haaland na Takumi Minamino. N'oge na-adịghị anya, a họọrọ ya n'etiti ndị egwuregwu 30 kachasị mma na 2020.
Ọ ka na-aga n'ihu na-eme nke ọma na ndị otu ya.
E nwere oge mgbe onye na-ewepụta ihe na-eche na ọ naghị enwe ụdị mmetụta ndị njikwa ya tụrụ anya n'aka ya. Ka sportskeeda.com si kọwaa; ọ bụ na klọb ndị Austrian ka Szoboszlai ghọtara na ọ dị mkpa iteta n'ụra ya wee gba bọọlụ ọkachamara.
Dominik Szoboszlai Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Ọ bụghị nanị na onye na-egwu egwuregwu ahụ na-efegharị na klọb ya. Ọ rụkwara ọrụ gabigara oke maka obodo ya. N'ime otu egwuregwu Hungary megide Croatia na 2019, Szoboszlai chere ihu akara ngosi ụwa dịka Luka Modric na Ivan Rakitic. O gosipụtara ntozu okè kariri afọ ya ma ghara ile anya na ebe ọ na - enyere obodo ya aka inweta mmeri 2-1.
Ama ada akwa uko man enye an̄wana ye ikpọ owo ukara.
Ka m na-ede Bio a, Szoboszlai enyerela Salzburg aka jidesie ya ike na Austrian Bundesliga atọ. Nke a feat mere klọb kachasị dị ka AC Milan, PSG, Real Madrid na Leipzig ịbịa bịanye aka na ya.
Ndụ ya dị mma ka ọ malitere imeri ọtụtụ trophies maka ụlọ ọrụ ya.
Mgbe ya na nna ya kparịtasịrị, onye nke obere mechiri nkwekọrịta afọ anọ na ọkara ruru nde euro 20 na RB Leipzig na Jenụwarị 2021. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Dominik Szoboszlai Enyi / Nwunye Iji Bụrụ:
The free-kick perfectionist abuanala ihe dị ka mmekọrịta abụọ anyị maara. Nke mbu, o dere Kata (III) na 2019. O di nwute, akuko akuko banyere ịhụnanya ha adighi na ntọala siri ike. N'ihi ya, ọ dara ihe dị ka ọnwa atọ ọ malitere.
Zute ịhụnanya mbụ ya, Kata (III). Njikọ ha adịteghị aka.
N'enwe obi nkoropụ na mmekọrịta mbụ ya na-enweghị ihe ịga nke ọma, Szoboszlai na onye ọ bụla enweghị oge ruo na njedebe nke afọ 2020. Obi dị m ụtọ, ọ zutere ọmarịcha agba mara mma nke nwere aha, Fanni Gecsek, wee hụ ya n'anya.
Dominik nwere obi ike karịa na mmekọrịta ya na Fanni Gecsek. N'ihi ya, ọ na-ekenye foto ha na mgbasa ozi ọha na eze ọtụtụ mgbe.
Ka m na-ede Bio a, enyi nwanyị nwanyị na-eto eto na-esokarị ya n'ọtụtụ njem mba ụwa. N'ebe ahụ ka ọ na-akwado ya site n'akụkụ. Site na ihe anya, Fanni nwere ike bụrụ nwunye na nne ya n'ọdịnihu nye ụmụ ya amụrụ n'afọ.
Dominik Szoboszlai Ndụ Nke Onwe:
Gịnị na-eme ka otu n'ime ESPN si breakout Player maka afọ 2021? Nke mbu, obu onye na-akparita uka, na-emekorita mmadu, ma na-enweta ume site na otutu mmadu. O doro anya na ọ na-enwe ihu ọchị ma na-ekwusi ike na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. I nwere ike ikwenye na o ketara oke njiri mara akara Scorpio zodiac.
Football abụghị naanị ihe Szoboszlai dị mma na ya. Ewezuga usoro ọrụ ya, onye na-ewepụta ihe a na-etinyekarị oge iji bọọdụ ya na ndị enyi ya. Fọdụ ihe omume ntụrụndụ ya gụnyere isi nri na igwu egwuregwu vidio.
Ọ hụkwara na ya na ndị enyi ya na-anọrị mgbe ọ bụla nwere onwe ya.
Nnyocha na-egosi na ọ na-akwụ ụgwọ ego kwa afọ nke € 3 Nde na Salzburg. Ihe anyị na-ahụ dị iche bụ eziokwu ahụ na ọ chọghị ibi ndụ okomoko. Ọzọkwa, mgbasa ozi mmekọrịta ya na-ekpughe na Szoboszlai ekwesighi ịzụta njem maka onwe ya.
O doro anya na Salzburg nyere ya ụgbọ ala mara mma, nke ọ na-eji eme njem ya niile. N'ikpeazụ, na ego ya, anyị emeela atụmatụ Dominic Szoboszlai's Net Worth ịbụ ngụkọta nke who 4.5 (2021 Stats).
Oh ee! Ọ na-adị ya mma ịnya ụgbọ ala ya nke ọma.
Kemgbe ọ malitere ịbụ onye a ma ama, onye na-ewepụta ihe mpempe akwụkwọ akọwapụtarala otu esi enweta ezigbo obi ụtọ n'etiti ọrụ ya na ezinụlọ ya. N'ezie, mmeri ọ na-enwe na-atọ ya ụtọ naanị n'ihi na ya na ezinụlọ ya ga-eme ya. N'ihi ya, anyị na-ewetara gị ozi dị nkenke banyere brood nke Dominik.
Ezinaụlọ ya ahapụghị ebube nke ama ya.
Banyere Nna Dominik Szoboszlai:
Nna nna nke Midfield bụ Zsolt Szoboszlai. Ọ bụ ọkachamara n'ịgba bọọlụ nke agụụ ya na-anwụ mgbe ọ hapụsịrị egwuregwu ahụ. Mgbe ụbọchị egwu ya gwụrụ, Zsolt na-eme ka ọ mata ọzụzụ na-eto eto na agụmakwụkwọ Videoton. N'ebe ahụ, ọ kụziiri nwa ya ọtụtụ ụkpụrụ gbasara football.
Mgbe Videoton chụpụrụ Nna Szoboszlai na ụlọ akwụkwọ ha, ya na mmadụ abụọ ndị ọzọ mepụtara ụlọ akwụkwọ ntorobịa nke ha kpọrọ Foenix-Gold FC. N'ihi ya, ọ na-elekọta ntorobịa nwa ya nwoke na ebe egwuregwu ọhụrụ ya. Enweghị obi abụọ, Zsolt Szoboszlai bụ mkpali kasịnụ nke metụtaworo dribbler.
Ikekwe nna ya na-agwa ya ụfọdụ usoro ọ ga-esi mee iji gosipụta arụmọrụ ka mma.
Banyere mama Dominik Szoboszlai:
N'etiti ndị mụrụ ya, Zsanet Nemeth (nne ya) anọghị na-agafe agafe kemgbe ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ ama ama. N'ezie, ịhụnanya ya na nlekọta ya so n'ihe na-enyere ya aka ịtachi obi n'ọzụzụ niile ọ tara. Ikekwe ọ bụ nne ihere nke na-ahọrọ ịkwado nwa ya nwoke nwere mmetụta site na ndò.
O doro anya na ọ nwere nwa agbọghọ mara mma dịka nne ya. O doro anya na ọ kwadola di ya na nwa ya nwoke.
Banyere ụmụnne nwanne Dominik Szoboszlai:
N'oge a na-edekọta Bio a, Dominik nwere nanị otu nwanne nwanyị anyị maara banyere ya. O gosila ndị Fans otu ọ masịrị ya na obere nwanne ya nwoke mara mma na ibe Instagram. Afọ ha dị iche buru ezigbo ibu.
Enweghị mmetụta dị mma karịa mgbe ya na nwanne ya nwanyị mara mma na-egwu mmiri.
Banyere ndị ikwu Dominik Szoboszlai:
Kemgbe o biliri na kpakpando, ọ nweghị ozi gbasara nna nna ya na nne nne ya. Moreso, ndị ezinụlọ ya esiteghị na ya nwee obi ụtọ na ọganiihu ya. Agbanyeghị, anyị ji n'aka na ndị nne na nna ya, ndị ikwu ya na ndị ikwu ya nwere afọ ojuju maka ọrụ ya.
Dominik Szoboszlai Eziokwu Eziokwu:
Iji mechie Biography nke onye na-egwu egwuregwu, ebe a bụ eziokwu ole na ole gbasara ya nke ga-enyere gị aka ịmatacha akụkọ ndụ ya.
Eziokwu nke 1: Mmebi ụgwọ ọnwa:
Tebụl dị n'okpuru na-akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ ya na RB Salzburg. N'ezie, usoro ego ya ga-abawanye mgbe ọ kwagara Leipzig na 2021.
Kwa Afọ € 3 Nde
Kwa nke abụọ € 0.10
Nnyocha na-egosi na nwa amaala Hungary ga-arụ ọrụ afọ atọ iji rite ụgwọ ọrụ Dominik na-enweta n'ime otu ọnwa.
Nweta ego nke abuo:
Anyị etinyela nke ọma na nyocha gbasara ụgwọ ọnwa ya. Chọpụta n'onwe gị ego ole Szoboszlai ritere kemgbe ị bịara ebe a.
Kemgbe ị malitere ile Dominik Szoboszlai'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu nke 2: Dominik Szoboszlai igbu:
Kemgbe afọ ole na ole gara aga, Dominik amụtala ọtụtụ ihe n’aka papa ya. Ihe dị mkpa bụ ihe mmụta dị iche iche nke o mere ka e dee ya na uche ya, ebe ọ na-etinye ụfọdụ ka akara ncheta na-adịgide adịgide na aka ekpe ya.
Ọbụna jersey ya enweghị ike ikpuchi egbugbu mara mma na aka ya.
Ee! ọ tinyela ụfọdụ ederede nke ga-echetara ya oge ọ na-agba mgba na ụzọ ya. Ọnwụ ahụ gụrụ; “Chineke nyere onyinye. Ma na-enweghị ịchụ onwe onye n'àjà na mkpebi siri ike, ọ baghị uru ọ bụla ”.
Eziokwu nke 3: FIFA stats:
N'ime afọ ole na ole gara aga, Dominik egosiputa ọtụtụ àgwà ọma ndị bọọlụ nwere. Sịkwa, mgbede.com gụnyere ya n'etiti ndị ntorobịa kachasị mma na FIFA 20 vidiyo egwuregwu. Ọ bụ naanị ihe na-agbanwe agbanwe tupu ọ gafee ikike nke ikike ya. Ee, njikwa bọọlụ ya na ume ya enweghị ike nghọta.
O nwetara ezigbo FIFA stats.
Akụkọ ndụ anyị nke Szoboszlai egosila na njem ndụ na-adịkarị mfe mgbe nne na nna na-arụsi ọrụ ike. Ọ bụ nna onye na-egwu egwuregwu lekọtara agụụ ya maka football mgbe nne ya gbara ya ume n'ọnọdụ ndị siri ike.
Obi abụọ ọ bụla, Szoboszlai na-enwekarị ekele maka ezinụlọ ya nke nyefere ya ime ka ha dị mpako site na egwuregwu. N'ezie, ọ bụ ha kpatara na ọ hapụghị eziokwu nke nrọ ya.
Daalụ maka ịgụ Akụkọ ndụ anyị Szoboszlai. Jiri obiọma, kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọta iwu ọ bụla na Biography a. Ọzọkwa, lee anya na nchịkọta nke ncheta dribbler na tebụl dị n'okpuru.
Azịza akụkọ ndụ:
Aha n'uju: Dominik Szoboszlai
aha otutu: obere
Age: 20 afọ na ọnwa 5.
Ebe amụrụ onye: Szekesfehervar, Hungary
Nna: Zsolt Szoboszlai
Nne: Zsanet Nemeth
Enyi / Nwunye ka ọ buru: Kata (III) - (Enyi nwanyị)
Fanni Gecsek (Enyi nwanyị na 2021)
Ezigbo Net: Million 4.5 million (2021 Ọnọdụ)
Rygwọ ọnwa kwa afọ: 3 Nde (na Salzburg)
Ihe omume: isi nri na igwu egwuregwu vidio
Bọchị agbanweela: Machị 16, 2021